AMISOM “Waxaan gacan ka geysan donaa amniga doorashada la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo 2020/2021” – Kalfadhi
AMISOM “Waxaan gacan ka geysan donaa amniga doorashada la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo 2020/2021”
in Aragti, Baarlamaanka
AMISOM Police Commissioner, Inspector General of Police (AIGP), Augustine Magnus Kailie, AMISOM Police Chief of Staff and other participants attend a public awareness forum on Somalia's 2020/21 Upcoming Elections in Mogadishu on 24 November 2019. The forum was organized by civil society organizations with the support of the African Union Mission in Somalia. AMISOM Photo / Ilyas Ahmed
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa mar kale ku celiyay in ay ka go’an tahay xaqiijinta in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho madax bannaan si nabad ah Sannadka 2020/2021.
Augustine Magnus Kailie, oo ah Taliyaha Ciidanka Boliiska AMISOM ayaa u sheegay Bulshada rayidka ah, wakiillada Xisbiyada siyaasadeed iyo guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka Qaranka (NIEC), in AMISOM oo kaashaneysa daneeyayaasha Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay Gacan ka geysato sidii ay u dhici lahayd doorasho Qof iyo Cod ah si xor iyo xalaal ah.
Kailie, ayaa sheegay in hoggaanka Soomaaliya ay muujiyeen sida ay uga go’an tahay inay ka guuraan qaabkii hore ee awood qaybsiga Qabiilka ee 4.5 si loo qabto doorasho Qof iyo cod ah iyaguna ay door ka qaadan doonaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dedaallo ballaaran ugu jirta in ay Dalka ka qabsoonto doorasho Qof iyo cod ah 2020/2021-ka, iyadoo dhinaca kalana howl-gallo baaxad leh oo lagu xaqiijinayo ammaanka ka waddo Gobollada Dalka.
Xeerka Qoondaha Miisaaniyadda ee sanadkan 2020
Golaha shacabka oo ansixiyay ku noqashada Qoondaha Miisaaniyaddda 2019-ka